करुणा चन्दना - ALinks
लेखक: करुणा चन्दना
इटाली यात्रा को योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? मुख्य पर्यटक आकर्षणहरू भ्रमण गर्नुहोस्!
डिसेम्बर 1, 2021 करुणा चन्दना इटाली, यात्रा
इटाली भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ इटालीका केही पर्यटक आकर्षणहरू छन्। यी आकर्षणहरू सम्झना गर्नु हुँदैन। इटाली रोमन साम्राज्यको जन्मस्थल हो। इटाली पर्यटकहरु को लागी शीर्ष आकर्षणहरु सबै कला र वास्तुकला होईन। यस देशलाई प्राकृतिक आकर्षणले पनि आशीर्वाद दिन्छ।
टर्कीका लागि भिसा कसरी पाउने? व्यापार र टर्कीका लागि पर्यटक भिसाका लागि द्रुत मार्गनिर्देशन
नोभेम्बर 24, 2021 करुणा चन्दना टर्की, भिसा
टर्कीमा छोटो प्रवासको लागि भिसा प्राप्त गर्न, पर्यटन वा व्यवसायको लागि, संसारमा धेरै जसो राहदानीहरूको लागि एकदम सजिलो छ। तपाईसँग एक वा दुई वा तलका विकल्पहरू छन् तपाईको राहदानी र
कुवेतका लागि भिसा फ्री देशहरू
अक्टोबर 31, 2021 करुणा चन्दना यात्रा
कुवेती नागरिकहरूको लागि भिसा आवश्यकताहरू कुवेतका नागरिकहरूमा राखिएको अन्य राज्यका अधिकारीहरूले प्रशासनिक प्रवेश प्रतिबन्धहरू हुन्। 13 अप्रिल 2021 सम्म, कुवेती नागरिकहरूले 96 देश र क्षेत्रहरूमा भिसा-मुक्त वा भिसा अन अराइभल पहुँच पाएका थिए, जसले कुवेती राहदानीलाई 55 औं स्थानमा राख्यो।
इक्वेडरमा शरण कसरी दाबी गर्ने?
अक्टोबर 28, 2021 करुणा चन्दना इक्वेडर
इक्वेडर, दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश मध्ये एक, महादेशको सबैभन्दा धेरै शरणार्थी जनसंख्या छ। राष्ट्रको स्थापना सन् २०१० को डिसेम्बरमा भएको थियो। यसमा लगभग ५४,३४२ दर्ता शरणार्थी छन्। र त्यहाँ लगभग 2010 शरण आवेदकहरू छन्। देशको वास्तविक शरणार्थी जनसंख्या हो
डोमिनिकन रिपब्लिकको लागि शरण कसरी आवेदन गर्ने
अक्टोबर 27, 2021 करुणा चन्दना डोमिनिकन गणतन्त्र
राष्ट्रिय शरणार्थी आयोग ("CONARE" यसको स्पेनी संक्षिप्त नामको लागि) ले शरण दावीहरूमा निर्णय गर्दछ जसले कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी स्थिति दिइन्छ कि भनेर निर्णय गर्दछ, र आवेदनहरू ONR मा पेश गरिन्छ, जुन जनरलको सहायक निकाय हो।
साइप्रसको लागि शरण कसरी आवेदन गर्ने?
अक्टोबर 26, 2021 करुणा चन्दना साइप्रस
शरणार्थीहरूले कानुनी सल्लाह खोज्नु सामान्य अभ्यास हो। यो उनीहरूको शरण दावी साइप्रसको शरण सेवाले पहिलो पटक अस्वीकार गरेपछि हो। यो अझै पनि सुरु देखि तयारी गर्न महत्वपूर्ण छ
क्यानाडा बाट टर्की को लागी एक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने? एक छिटो गाइड
अक्टोबर 25, 2021 करुणा चन्दना टर्की, भिसा
क्यानाडाली नागरिकहरु को लागी टर्की भिसा टर्की १th औं विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था हो, र जनसंख्या अनुसार यो यूरोप मा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो। देश उत्सुक यात्रीहरु को लागी एक गलियारा को रूप मा कार्य गर्दछ को लागी गतिविधिहरु को एक बिल्कुल विविध दायरा प्रदान गर्दछ
क्युबाको लागि शरण आवेदन कसरी गर्ने?
अक्टोबर 24, 2021 करुणा चन्दना यात्रा
यद्यपि क्युबा भ्रमण गर्न को लागी एक सुरक्षित स्थान हो। त्यहाँ एक यात्रा तपाइँलाई पैसाको ठगी, पिकपॉकेटि,, र चोरी सहित "साना" अपराधहरु लाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ प्रदूषित नल को पानी जस्तै स्वास्थ्य जोखिम को बारे मा सजग हुनु पर्छ। साथै, लामखुट्टे जनित संक्रमण, र
संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स मा रोजगार कसरी पाउने? एक छोटो गाइड
अक्टोबर 24, 2021 करुणा चन्दना जब, यूएई
तपाइँ संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सार्ने योजना गरीरहनुभएको छ र यसैले तपाइँ एक जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ। संयुक्त अरब अमीरात मा, केहि सबैभन्दा लोकप्रिय कामहरु डाटा खनन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मा, वेब डिजाइन मा, र मा छन्
दुबईका लागि भिसा फ्री देशहरू
अक्टोबर 22, 2021 करुणा चन्दना यात्रा
एमिराटी नागरिकहरूको लागि भिसा आवश्यकताहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) का नागरिकहरूमा राखिएको अन्य राज्यका अधिकारीहरूले प्रशासनिक प्रवेश प्रतिबन्धहरू हुन्।6जुलाई 2021 सम्म, एमिराटी नागरिकहरूले 175 देश र क्षेत्रहरूमा भिसा-मुक्त वा भिसा अन अराइभल पहुँच पाएका थिए (समान, भन्नुहोस्,
123 ... 21 अर्को पोस्टहरू»